I-AMVICA YOKUHAMBA NGOKUPHELELEYO KWI-UAV - IGeofumadas
Ikhaya/GPS / Izixhobo/ZORHWEBO ZE-UAV EXPO AMERICAS
GPS / IzixhoboZobunjineliezintsha
Nge-7,8 kaSeptemba, 9 kunye ne-XNUMX yalo nyaka uzakubanjelwa eLas Vegas Nevada - eUSA "Imiboniso ye-UAV yaseMelika". Yimboniso yorhwebo ekhokelayo eMntla Melika kunye neenkomfa ezijolise kudityaniso lwentengiso kunye nokusebenza kunye nababonisi abaninzi kunawo nawuphi na umsitho wentengiso yedrone. Ibandakanya izihloko ngolwakhiwo, amandla kunye neenkonzo zoluntu, amaHlathi nezolimo; Izibonelelo nezothutho; Imigodi kunye neeAggregates; Iinkonzo zikaxakeka nokhuseleko loluntu; Ukhuseleko; kunye nokuma komhlaba kunye nemephu
Ukongeza, ibandakanya izihloko kwimiceli mngeni kunye namathuba athiwe thaca yi-COVID-19, indawo elawulayo, ukudityaniswa okukhuselekileyo kwe-UAS kwindawo yomoya, kunye neetekhnoloji eziphazamisayo ze-UAS.
Abangaphezulu kwe-100 ababonisi abavela kwihlabathi liphela baya kuthi thaca ubuchule babo, iimveliso kunye nezisombululo ezinxulumene nedrones, ulwakhiwo, amandla, ezolimo, iziseko zophuhliso, ezothutho, impendulo engxamisekileyo okanye imephu. Njengakwezinye iinguqulelo zalo msitho ubalaseleyo, izakubonisa iiseshoni ezithe nkqo zeshishini ezijongana nemiceli mngeni eyodwa kunye namathuba eshishini ngalinye, kunye neendlela ezifanelekileyo zokudityaniswa nokusebenza kwe-drone ngokukhuselekileyo nangokusebenzayo.
Injongo yomsitho kukutsala abasebenzisi abanomdla kwishishini le-UAV, ukubonelela ngonxibelelwano olwaneleyo phakathi kwabaqeqeshi kunye neenkokheli zemveliso nganye ebonisiweyo. Ke, ukudalwa kwamathuba oxhulumaniso kuyaqala, kunye nothethathethwano lokufumana izisombululo okanye iimveliso ezihambelana neemfuno. Izihloko ezinzulu ezinxulumene nale mibuzo zilandelayo kuxoxwa ngazo kwinkomfa:
Kuqhubeka ntoni ngommiselo we-FAA?
Iidrones zingalikhawulezisa njani ishishini lakho?
Siza kuyibona nini inkqubo ye-UTM edibeneyo?
Umbutho ungasondela njani ekwenzeni inkqubo yedrone esikalini?
Ziza kuthetha ntoni i-ID ekude ngekamva lesibhakabhaka?
Uluvo lwasesidlangalaleni lweedrones lukuchaphazela njani ukwamkelwa?
Umbutho kufuneka uyibale njani i-ROI yee-UAV?
Ngaba ikhona eyona ndlela ifanelekileyo yokwenza ukhuseleko kumgangatho webhizinisi?
Kuthetha ntoni ukuphumeza iidrones ezisebenzisa usetyenziso lwe-AI kunye neML?
Ngaba abaqhubi banokulichaza njani ngcono ixabiso letheknoloji yedrone ngokwemveliso, ukusebenziseka lula kunye nenzuzo?
Ezona klasi zodidi oluphezulu ezivela kubanikezeli besisombululo abakhokelela kwihlabathi ziboniswa kwimiboniso, iqinisekisa indlela efanelekileyo yokulinganisa kunye nokuthelekisa izisombululo. Imisebenzi yezi ntsuku zikhankanyiweyo yahlulwe ngolu hlobo lulandelayo: Nge-7 kaSeptemba: Ingqungquthela yangaphambi kwenkomfa, imiboniso noomasifundisane ukusukela nge-8 ukuya kwi-9 kaSeptemba: Inkqubo yeenkomfa nemiboniso.
¿KUTHENI UFANELE UKUYA KULE SIGANEKO?
Kwindawo yokuqala, ukuba nendawo yokutshintshiselana ngezimvo neengcali kunye neenkokheli zeshishini sesinye sezizathu zokuqala zokuba kutheni ukuya kumsitho kufuneka kuthathelwe ingqalelo. Ezi zinto zeza njani kuphuhliso lwezisombululo kunye neemveliso ukuphucula imisebenzi okanye iinkqubo ezenziwa ngabahlalutyi mihla le.
Esinye isizathu kukunxibelelana neenkokheli kunye nokukhuthaza ulwazi kwindawo efunekayo. Okulandelayo, singatsho ukuba olu hlobo lomnyhadala lubalulekile ekwenzeni ubuchwephesha bamuva bubonakale, ukukhuthaza imiboniso kunye nokuvelisa izivumelwano ezinokubakho. Kwinkomfa, iinkokheli, iingcali okanye abaphuhlisi banokubonisa ukurekhodwa kwangaphambili kwezakhono zeemveliso zabo kwaye babonakalise oko badalelwe kona.
Abanye banokuzibuza, ngubani onokuya kulo msitho: Abanini beeMpahla kunye nabaSebenzisi, i-EPC (ubuNjineli / ukuThenga / uKwakha), i-AEC (i-Architects / iinjineli / uKwakha), abaPhononongo, iiNkokheli zeTekhnoloji, abaPhathi beProjekthi, Amafama kunye nabaCebisi bezityalo, abaPhenduli bokuqala kunye noMthetho. Ukunyanzeliswa.
Kwiwebhusayithi yenkomfa, banokufikelela kuthotho lweewebhu ezininzi zasimahla ezinxulumene nokusetyenziswa kwe-UAV. Ezinye zezihloko zezi semina zezi: "Ii-Drones ze-AI: Ukubandakanya ii-UAV ezinomdla kwi-Workflow","Ukunika ingxelo yexesha lokwenyani: Impembelelo ye-UAV kukhuseleko loluntu”. Ithuba lokuphucula ulwazi kunye nokuzibandakanya ekusetyenzisweni kwezi zixhobo zibalulekileyo zokufumana idatha. Ukongeza, ii-webinars ezinxulumene nohlelo lwangaphambili lwenkomfa nazo zilayishwe kwiwebhu, kwimeko apho kukho nabani na onomdla wokujonga lo mxholo.
Iindleko zenkomfa ziyahluka ngokuxhomekeke kumhla okhethiweyo kunye nohlobo lokuhamba phakathi kwe- $ 150 ukuya kwi- $ 895, ungakhetha isaphulelo seqela. Kukho iipasile ezigcweleyo, Ngenye imini, i-Droneresponders, kunye nomnyango kuphela kwigumbi lokubonisa. Banokujongwa kwiwebhusayithi yomsitho ngokunqakraza apha.
Ukupasa simahla okanye simahla kufumaneka kuphela kwindawo yomboniso, apho uya kuba nakho ukufikelela kwiindawo apho ezona zinto zibalulekileyo kwezobuchwephesha kwezentengiso ze-UAS emhlabeni ziboniswa, kunye nezo zenziwe ziiyunivesithi eziphambili kwi " IYunivesithi yaseYunivesithi ”. Ukongeza koku kungasentla, ukwamkelwa kwi- "Exhibit Hall Theatre" kwamkelwa, okuya kuba nenkqubo yemfundo yabo bonke abaphulaphuli. Abantu abanokupasa simahla baya kuba nakho ukonwabela iiseshoni zonxibelelwano nabantu abazimaseyo kunye nabo baphethe izitandi.
Kusenokwenzeka ukuthumela ulwazi lokuthatha inxaxheba kwimiboniso nakwinxalenye yezithethi zomsitho. Kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba iBhodi yeeNgcebiso kunye nabo banoxanduva lweNkomfa, kufuneka bafundisise ngononophelo zonke izindululo zabangeneleli okanye izithethi kolu hlelo.
Siyazi ukuba sisesichengeni sokusuleleka yi-COVID-19, yiyo loo nto umbutho uthathe amanyathelo okhuseleko angqongqo kubo bonke abazimase, kwaye ke yonke into yenzeka kwindawo esempilweni kwaye ingenabungozi.
Phakathi kwamanyathelo okhuseleko athathelwe ingqalelo abandakanya: ukuthintelwa kokunxibelelana ngokomzimba, ukubhaliswa ngaphandle konxibelelwano, ukunxaxha ekuhlaleni, ukucoca rhoqo, ukucoceka kwezandla, ukuphuculwa kokhuseleko lokutya, ukugubungela ubuso obunyanzelekileyo (ukusetyenziswa kweemaski), kunye nabantu abakulungeleyo ukubonelela ngoncedo lokuqala .
I-UAV yezoRhwebo eMelika iboniswa ziiNdaba zoRhwebo ze-UAV kwaye iququzelelwe ngoNxibelelwano olwahlukeneyo, umvelisi wemisitho yehlabathi oququzelela i-UAV Expo yaseYurophu (eAmsterdam, eNetherlands), iGeoBusiness Show (eLondon, e-UK) nakwiVeki ye-Geo, equka iMephu yeLidar yeHlabathi. Iforum, i-SPAR 3D Expo kunye neNkomfa kunye ne-AEC Expo elandelayo kunye neNkomfa. Ungandwendwela iinethiwekhi zabo ngolwazi oluthe kratya kwiintsuku ezizayo: Nxibelelanisa, Facebook, Twitter, YouTube, kwaye Instagram.
Ngethamsanqa kulo nyaka iTwingeo kunye neGeofumadas zithatha inxaxheba njengabaxhasi bomnyhadala, ukubonelela ngesigubungelo somsitho kubo bonke abo banomdla. Siza kukuzisa lonke ulwazi kuqala.